KPZ Electric motokari shotcrete Machine
KPZ-A Air injini shotcrete Machine
KPZ-D Diesel injini shotcrete Machine
Furo Concrete Pump
Kuumba Duri chisanganiso
Shotcretre / yavaGuni kushanda
Shotcrete, yavaGuni kana sprayed kongiri iri kongiri kana dhaka kunyora kuburikidza hosipaipi uye pneumatically projected panguva mukuru velocity mugomo pose, sezvinoita kuvakwa nzira. Zvinonzi yemanyorero ine kwakajairika simbi pematanda, simbi pajira riya, kana fibers.
Kazhinji Shotcrete ndiyo anoreva zvose izwi vose wokunaya-kunovhengana uye yakaoma-Mix shanduro. Zvisinei, In dziva kuvaka, shotcrete zvinoreva kunyorovesa kunovhengana uye yavaGuni kuti dziome kongiri. Muchirevo chechinyorwa chino, mazwi aya haana kuchinjaniswa.
Shotcrete anoiswa uye nekuumbanidzwa panguva imwecheteyo, nokuda simba pamwe kamwene. Inogona sprayed pana chero mhando kana pezvakaita pamusoro, kusanganisira kutwasuka kana panhongonya munzvimbo.
Dry vs. nyoro Mix
T iye yakaoma kunovhengana nzira kunosanganisira rikaisa pakaoma zvokubikisa ive Hopper uye ipapo irikupa navo pneumatically kuburikidza hosipaipi kusvika kamwene. The nozzleman anodzora kuwedzera kwemvura panguva kamwene. Mvura yakaoma musanganiswa haisi zvachose zvakavhenganiswa, asi rapera sezvo musanganiswa paricharova kugamuchirwa pamusoro. Izvi kunoda unyanzvi nozzleman, kunyanya panyaya gobvu kana kuvanzwira tsitsi yanyatsosimba zvikamu. Betsero dze yakaoma kunovhengana kwacho vari kuti mvura kugutsikana zvinogona kugadziridzwa pakarepo kubudikidza nozzleman, vachibvumira tibudirire placement mune panhongonya uye kutwasuka mafomu pasina kushandisa accelerators. The yakaoma kunovhengana kwacho inobatsira zvakagadzirwa zvikumbiro kana zvakakodzera kurega kakawanda, sezvo yakaoma acho ari nyore asunungurwa kubva hosipaipi.
Wet-kunovhengana shotcrete kunosanganisira kupomba ane kare kugadzirirwa kongiri, yemanyorero makagadzirira-yakavhenganiswa kongiri, kusvikira kamwene. Compressed mhepo kutaurwa panguva kamwene kumugombedzera musanganiswa padenga kugamuchirwa pamusoro. Wokunaya-muitiro nzira kazhinji pave zvishoma rebound, tsvina (kana zvinhu inowira pasi), uye guruva zvichienzaniswa yakaoma-Mix muitiro. The mukana mukuru wokunaya-kunovhengana muitiro zvose zvokubikisa vari yakavhenganiswa nemvura uye yokuvirisa zvaida, uye mabhuku uyewo hombe anogona kuiswa shoma nguva pane yakaoma muitiro.
S hotcrete michina zvinowanikwa izvo kudzora zvakakwana muitiro uye kuti makasimba chaizvo uye nyore. Manual uye zvemaziso nzira inoshandiswa nemadhaka spraying muitiro asi nyoro sprayed kongiri kare kuiswa pachishandiswa muchina. Mukuru pfapfaidzo outputs uye makuru muchinjikwa-zvikamu zvinoda basa kuti michini. Concrete spraying enyika pamwe duplex pombi Anonyanyowanika kushandiswa kushanda nyoro mixes. Kusiyana kwakajairika kongiri pombi, izvi hurongwa vane kundosangana chinodiwa kununura munhu chesamende aibuda iri sezvo dzose sezvinobvira, uye saka chinoramba, kuti hunovimbisa homogeneous pfapfaidzo kushanda '.